Akụkọ kacha ọhụrụ - CAPSI
Mmasị zuru ụwa ọnụ n'ihe gbasara ọrụ enyemaka na itinye ego na ọha mmadụ na Africa na kọntinent ndị na-abụghị Euro-America na-eto nke ukwuu. Afọ ndị na-adịbeghị anya ahụwo mmụba dị ukwuu na nyocha na ederede metụtara isiokwu ndị a. N'agbanyeghị nke a, ọmụmụ nke ngalaba ndị a na-amalite naanị site na nyocha, nkuzi na akwụkwọ dị n'Africa. Na nzaghachi na enweghị nke a raara onwe ya nye, agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ, Wits Business School na South Africa Trust webatara Center on African Philanthropy and Social Investment.
Ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ịkwado uto nke ubi a site n'imejupụta oghere dị ugbu a na nkuzi, nyocha na mbipụta. Ọ na-eje ozi dị ka isi iyi nke ihe ọmụma, netwọk mmekọrịta, na mkpali maka ihe ọhụrụ, ntinye aka na obodo na ụbara mmetụta nke ịbụ nwa amaala na ọrụ mmekọrịta ọha na eze na mpaghara Africa na n'ofe. Site na mmalite, atumatu a welitere nleba anya nke mba Africa - na-achọ ịghọta omume enyemaka mmadụ n'ọnọdụ dị iche iche na akụkọ ihe mere eme.
Jikọọ akụkọ CAPSI kachasị ọhụrụ. Anyị na-etinye aka mgbe niile n'ọrụ ndị na-akpụzi ma na-agwa ndị ọrụ enyemaka n'Africa.
Njirimara Board Ndụmọdụ
Njirimara Onye nyocha mmekọrịta
Akwụkwọ na Akụkọ
Akwụkwọ akụkọ na-aga n'ihu
Ngwa ịchịkọta akụrụngwa
Njirimara nwata akwụkwọ
Nwere ike 31, 2022
Gụọ akụkọ a
Nwere ike 25, 2022
Nwere ike 24, 2022
Ntụgharị uche mkparịta ụka Kisima nkeji nkeji
Mahadum Auburn gara CAPSI
Onye mmeri nke Aspire Higher Project; Imbokodo Launchpad
Nkwupụta sitere na ọgbakọ mba Afrịka na ndị Africa